Inkampani News - Connexions Technology (Dong Guan) Ltd.
IConnexions Technology (Dongguan) Ltd. esungulwe ngo-2004, kuyinto ehamba phambili OEM / ODM Umkhiqizi for Izintambo, Plastic Ukubumba futhi Consumer Electronics. Ama-Connexions avuselele izinga lakamuva lokuphathwa kwekhwalithi yamazwe omhlaba le-ISO9001: 2015. Zonke izisebenzi ze-Connexionsâ € ™ zibamba iqhaza ohlelweni lwe-ISO9001 ukuqinisekisa amakhasimende anemikhiqizo namanani aphezulu athembekile. Ama-connexions abe yilungu le-HDMI eyamukelayo kusukela ngo-2010 Imikhiqizo yethu nayo iyahambisana ne-UL, CUL, ETL CIA / TIA, Rohs / Reach standard. Ama-connexions anemishini engaphezu kwengu-50 esezingeni eliphakeme yemishini ekhiqiza ikhebula kanye nezinsiza zomhlangano wabathengi umhlangano & ama-20 plastic injection injection molding, blister imishini yokukhiqiza. Ngaphandle kwemishini yokukhiqiza ekhethekile, inkampani nayo ifakwe izindawo zokuhlola ezifanelekile ukwenza ukuphepha, ukuhlolwa kokusebenza kanye nokuhlaziywa kwesiginali ukuqinisekisa ikhwalithi ephezulu nokuhambisana kwamazinga. Zonke izintambo zivivinywa ngo-100% ngaphambi kokuthunyelwa.